EMELA SMS SITE NA IPHONE - IOS - 2019
N'ịnweta laptọọpụ nwere njikọ Ịntanetị jikọtara, dịka ọmụmaatụ, karịa netwọk dị na mpaghara, onye ọrụ nwere ike ịmepụta ebe ị nwere ike ịmepụta ihe niile ị nwere ike ịnye ngwaọrụ niile dịnụ na Intaneti Ịntanetị (smartphones, tablets, laptops, consoles games, etc.). ). N'ebe a, ihe kachasị mkpa bụ ịnye laptọọpụ ya na software dị elu, na enyemaka nke Intanet ga-ekesa.
Onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị mfe maka Windows OS, nke ga-ekwe ka ị na-ekesa Internet site na laptọọpụ gị ma ọ bụ kọmputa desktọọpụ (n'okpuru nkwụnye Wi-Fi) na ngwaọrụ ndị ọzọ nke dị mkpa ịnweta Ịntanetị Ụwa.
Anyị na-akwado ịhụ: Mmemme ndị ọzọ maka ikesa Wi-Fi
Ịbanye nbanye na paswọọdụ
Ngwunye netwọk ọ bụla nwere aha pụrụ iche nke ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịchọta netwọk a. Na mgbakwunye, usoro ihe omume ahụ chọrọ ka ị dee paswọọdụ siri ike nke ga-echebe netwọk gị site na ndị ọbịa na-akpọghị ya. Okwuntughe ga-abụ ma ọ dịkarịa ala mpempe asatọ.
Họrọ njikọ Ịntanetị
Ọ bụrụ na kọmputa gị nwere ọtụtụ ebe njikọ Ịntanetị, mgbe ahụ ka usoro ihe omume ahụ rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, ị ghaghị ịkọwa isi iyi nke ga-esi kesaa Internet.
Gosipụta ozi gbasara ngwaọrụ ejiri
Mgbe ngwaọrụ ọ bụla jikọtara na netwọk ikuku gị, ozi dịka aha ya, IP na MAC ga-egosipụta na windo nke usoro ihe omume ahụ.
Uru nke mebere router Manager:
1. Ọhụụ kachasị mfe nke ọ bụla onye ọrụ nwere ike ịchọpụta;
2. N'adịghị ka ọtụtụ mmemme yiri nke ahụ, Onye Na-ahụ Maka Nchọgharị Ngwaọrụ adịghị achọ ịmalitegharịa usoro sistemụ mgbe e mechara nwụnye;
3. Ihe omume a bụ n'efu.
Ụkọ ihe ụfọdụ nke mebere router Manager:
1. Enweghị nkwado nke interface maka asụsụ Russian.
Onye na-ahụ maka ihe nhazi ngwa ngwa bụ usoro kachasị mfe na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntọala. Ihe niile ị chọrọ bụ ịbanye aha njirimara na paswọọdụ, gosi isi iyi nke Intaneti, ihe omume ahụ dịkwa njikere maka ikesa Internet. Ihe ngwọta kachasị maka ndị ọrụ na-adịghị achọ ihe mmemme na-arụbiga ọrụ ókè.
Ibudata onye oru nyochaa oru oma
Gbanwee onye nhazi ngwa ngwa Onye na-emeputa ihe ntụgharị ngwa ngwa CloneDrive mebere DVDFab Mebere Okuku
Router Manager bụ onye bara uru bụ ngwa bara uru nke ị ga - eji ngwa ngwa depụta netwọk ikuku na - adabere na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ na modiri Wi - Fi dị mma.
Onye Mmepụta: Chris Pietschmann